Wasakhda Hawada iyo Bacriminta Heerkulka Sare Rakibidda Shirkadaha Haamaha iyo Warshadda | YiZheng
Waa maxay Haanta Halbeegga Horizontal?
Heerkulka Sare Qashinka & Bacriminta Khamiirinta Isku Darka Haanta inta badan waxay fuliyaan kuleylka aerobic-ka ee xoolaha iyo digada digaaga, qashinka jikada, qashinka iyo qashinka kale iyadoo la adeegsanayo waxqabadka sheybaarka si loo gaaro isku darsamida isku darsamida oo aan dhib lahayn, xasillooneyn, hoos udhac lahayn.
Sidee buu u shaqeeyaa qashinka & bacriminta khamiirka isku darka haanta？
Marka hore, dhig qalabka lagu khamiirinayo Qashinka & Bacriminta Khamiirka Isku Qasan Haanta ka imanaya dekedda quudinta iyada oo loo sii marinayo suunka xamuulka qaada. Inta aad agabka saareyso, bilow mootada weyn, iyo hoos u dhigaha xawaaraha mootada ayaa wada wiishka weyn si loo bilaabo isku dhafka. Isla mar ahaantaana, garbaha wareega ee ku yaal wiishka kicinta ayaa ka weecinaya qalabka xayawaanka, sidaas darteed qalabku xiriir buuxa ayuu la leeyahay hawada, sidaa darteed qalabka la khamiirinayo waxay bilaabayaan inay ku kulmaan halsano aerobic ah.
Marka labaad, nidaamka kuleylka ee usha kululeynta korontada ee hoose waxaa xukuma sanduuqa korantada si loo bilaabo kuleylka saliida kuleylka ee kuleylka jirka. Inta kuleylka, heerkulka jirka khamiirka waxaa xakameynaya dareeraha heerkulka si loo xakameeyo heerkulka halista ee saldhiga halsano. Gobolka loo baahan yahay. Ka dib markii ay halsano ka mid ah maaddadu dhamaato, maaddada ayaa laga soo saaraa haanta talaabada xigta.
Qaab dhismeedka Qashinka & Bacriminta Khamiirka Isku Qasan Haanta waxaa loo qaybin karaa:
1. Nidaamka quudinta
2. Nidaamka halsano ee haanta
3. Nidaamka isku qasida awooda
4. Nidaamka siideynta
5. Nidaamka kuleylka iyo kuleylka
6. Qaybta dayactirka
7. Nidaamka xakamaynta korantada oo otomaatig ah
Faa'iidooyinka Qashinka & Bacriminta Khamiirka Isku Qasan Haanta
(1) Qalabku waa yaryahay, banaanka ayaa lagu rakibi karaa, umana baahna dhisme warshad. Waa warshad farsameysa mobilada, oo xallisa dhibaatada qiimaha badan ee dhismaha dhirta, gaadiidka masaafada dheer iyo ka shaqeynta xarunta dhexe;
(2) Daaweyn shaabadaysan, deodorization 99%, oo aan lahayn wasakh;
(3) Kuleylka kuleylka wanaagsan, oo aan ku xaddidnayn xilliga qabow, waxaa si caadi ah loogu duban karaa deegaanka ka hooseeya 20 darajo Celsius;
(4) Qalab farsamo oo wanaagsan, xalliya dhibaatada aashitada adag iyo nabaad-guurka alkali, nolol adeeg dheer;
(5) Hawl iyo maareyn fudud, alaabta ceeriin ee la soo geliyo sida digada xoolaha, si toos ah loo soo saaro bacrimin dabiici ah, si fudud wax loo barto loona shaqeeyo;
(6) Wareegga halsano wuxuu ku saabsan yahay 24-48 saacadood, oo awoodda wax-qabadku waa la kordhin karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha.
(7) Isticmaalka tamarta oo hooseeya, oo si weyn u dhimaysa kharashka soo saarista korantada;
(8) Noocyada jimicsiga ayaa ku noolaan kara kuna soo saari kara -25 ℃ -80 ℃. Bakteeriyada waxtarka leh ee la sameeyay waxay dili kartaa bakteeriyada waxyeelada leh ee walxaha ceyriinka ah. Astaantani waxay ka dhigeysaa bacriminta kale ee dabiiciga ah kuwo aan la barbardhigi karin iyo wixii ka dambeeya.
Qashinka & Digada Khamiista Isku Darka Muuqaalka Muuqaalka Haamaha
Xulashada Qashin-qubka & Digada Xulka Mashiinka Xulashada Haanta
Cabbirka qalabka （L * W * H）
³ 10m³ (Awood biyo)
³ 20m³ (Awood biyo)
³ 30m³ (awooda biyaha)
Qalabka hawo-qaadista hawada
Mid ka mid ah nidaamyada xakamaynta otomaatiga ah
Hore: Qaadista Haydarooliga Qaadista Turner
Xiga: Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Naafada